अधिकांश संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यक – Sourya Online
सौर्य अनलाइन २०७८ वैशाख २१ गते १४:३० मा प्रकाशित
चितवन । अस्पतालमा उपचारका लागि आउने अधिकांश संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यक पर्ने गरेको छ । पहिलो लहरको कोरोनामा केही संक्रमितलाई मात्रै अक्सिजन आवश्यक परेको भए पनि दोस्रो लहरमा भने अस्पतालमा आएका अधिकांशलाई अक्सिजन आवश्यक परेको हो ।
भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष एवं फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारीले पहिलो लहरमा ११० जना बिरामी भर्ना हुँदा २० जनालाई अक्सिजन लगाउनुपरेको तर अहिले भर्ना हुने सबैलाई अक्सिजन दिन परेको बताए । गत वर्ष उमेर बढी र दीर्घरोगीमा संक्रमण बढी देखिएको भए पनि अहिले सबै उमेर समूह प्रभावित छन् । सामान्य अवस्थाका संक्रमित घरमै बसेका छन् भने जटिल अवस्था आउनासाथ अस्पताल आउने गरेका छन् ।
उनका अनुसार पहिलो लहरमा ‘माइल्ड’, ‘मोडरेट’ र ‘सिभर’ वर्गीकरण गरेर उपचार गरिएकामा अहिले एउटै बिरामी ४८ घण्टामा माइल्डबाट मोडरेट अनि सिभर भएर घरको आइसोलेशनबाट एचडियु हुँदै सघन उपचार कक्षमा सार्नुपरेको छ । जुनसुकै बेला संक्रमितलाई अस्पताल भर्ना गरेर अक्सिजन दिनु परेको उनको भनाइ छ ।
अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समूहका संयोजक डा. प्रमोद पौडेलले कतिपयले घरमा समेत अक्सिजन लगाएको जानकारीमा आएको बताए । अस्पतालमा भर्ना भएका अधिकांशलाई अक्सिजन दिनुपरेको उनले जानकारी दिए । उनको भनाइमा अस्पतालमा रहेको हाइफ्लो नेजल क्यानुलाबाट समेत सङ्क्रमितलाई अक्सिजन दिइँदै आएको छ । भरतपुर अस्पतालमा यस्ता उपकरण १० वटा छन् । यसले एक मिनेटमा साठी लिटरसम्म अक्सिजन दिन सक्छ । पौडेलले भने, ‘हामीले अक्सिजन प्लान्टबाट सोझै क्यानुलामार्फत बिरामीलाई अक्सिजन दिने गरेका छौँ ।’
अत्यधिक अक्सिजन आवश्यक पर्ने बिरामीलाई यस उपकरणमार्फत अक्सिजन दिइँदै आएको छ । साधारण लक्षण भएका संक्रमित घरमै बस्ने र जटिल भएपछि मात्रै अस्पताल आउने प्रचलनका कारण आएका सबैलाई अक्सिजन दिनु परेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
चितवन मेडिकल कलेजका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालले अस्पताल ल्याउनुपर्ने संक्रमित एम्बुलेन्समै अक्सिजन लगाएर आएपछि नियमित अक्सिजन लगाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । पहिलो लहरमा अस्पतालमा आउने संक्रमितमध्ये ९० प्रतिशत सामान्य थिए भने अहिले ९० प्रतिशत जटिल हुने गरेका छन् । ती सबैलाई अक्सिजनको सहायताले उपचार गर्नुपरेको छ ।